Ciidamo horleh oo gaaray Magaalada Dhuusamareeb | Star FM
Home Wararka Soomaaliya Ciidamo horleh oo gaaray Magaalada Dhuusamareeb
Ciidamo horleh oo gaaray Magaalada Dhuusamareeb
Waxaa maanta magaalada Dhuusamareebee caasimadda Galmudug ka dagtay diyaarad siday ciidamo ka tirsan kuwa Gorgor .
Ciidamada oo horay u joogay magalada Dhuusamareeb ayaa dhawaan laga soo qaaday, hayeeshee maanta ayaa dib loogu celiyay, waxaana ay ka tirsan yihiin Ururka 5-aad ee Gorgor.
Wararka laga helay Dhuusamareeb ayaa waxaa ay sheegayaan in ciidamada ay ku biireen oo ay xoojin u noqonayaan ururka 13-aad, Guutada 17-aad ee kumaandooska oo hore Dhuusamareeb u joogay.
Waraka ayaa waxaa ay intaasi ku darayaan in ciidamadaan ay ka mid noqonayaan Ciidamada ay dowladda Soomaaliya u diyaarisay howlgalka ka dhanka ah Al-Shabaab iyo howlgalka dib loogu soo celinayo gacanta dowladda degmada Guriceel oo ay la wareegeen ciidamo taabacsan Ahlusunna.
Previous articleDHAGEYSO:Guddoomiyaha guddiga suuq gaynta xoolaha nool laanta Garissa oo ka hadlay saameynta abaarta si gaar ah lo’da
Next articleDowladda dalka oo isniinta soo socota shaacisay inay tahay maalin fasax qaran ah